Xiisaha Lafa-gurka Gobannimo Tv iyo Somaliland waxa kala gudboon heshiiska Qadar iyo Sucuudiga | Aftahan News
Xiisaha Lafa-gurka Gobannimo Tv iyo Somaliland waxa kala gudboon heshiiska Qadar iyo Sucuudiga
Hargeysa (Aftahannews)- Sucuudiga iyo Dalalka Xulafada la ah ee Imaaraatka Carabta, Baxreyn iyo Masar, ayaa xidhiidhka u jaray Qadar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto kooxaha xagjirka ah, iyagoo xayiraad diblomaasiyeed, mid ganacsi iyo mid safarba ku soo rogay Qadar.
Haddaba, waxay is-weydiintu tahay, Somaliland maxay ka dheeftay Taageeradii ay u muujisay xulufada Su’uudiga iyo xidhiidh-u-jarkii Qadar, iyo waxay illaa hadda uga aamusantay heshiiskaas.
Waxaa Su’aalahaas iyo kuwo kale la weydiiyay oo Xubinta Lafa-gurka Gobanimotv ka qayb-qaadanaya Rashiid Jaamac Dheri oo ka mid ah Siyaasiyiinta reer Somaliland, isla markaana aqoon gaar ah u leh Dalalka Carabta, si dhawna ula socda dhaqdhaqaaqyada Siyaasadeed ee ka jira Mandaqadda, Waxaanan ugu horreyn weydiinnay Rashiid waxa uu Somaliland uga dhigan yahay heshiiska Qadar iyo Xulafada uu hoggaamiyo Sucuudigu ee ay hore u ula kala safatay?
2-Rashiid oo, oo aannu weydiiyey dariiqa Somaliland u mari karto inay taageerada ama soo dhawaynta heshiiska labada dhinac, inkasta oo ay hore u Qadar cadaawad ugu siyaasadeed ugu muujisay, waxa uu ku jawaabay.
3-Rashiid Jaama’ Dhari, waxa uu soo jeediyey inaan Xukuumadda ka aamusin waxyaabaha Mandaqadda ka dhacaya, sida dagaalkii Itoobiya, heshiiska Carabta iyo arrimo kale oo uu aaminsan yahay inay wanaagsanayd inay Somalilannd ka badheedho.